Xildhibaanadii ugu badnaa ee ka socda BFS oo tagaya Kismaanyo - Muqdisho Online
Home Wararka Xildhibaanadii ugu badnaa ee ka socda BFS oo tagaya Kismaanyo
Xildhibaanadii ugu badnaa ee ka socda BFS oo tagaya Kismaanyo
Labada maalin ee socda waxa la filayaa in magaalada Kismaanyo ay tagaan xildhibaano, siyaasiyiin iyo qurbo-joog kuwaas oo taageersan geedi socodka doorashada Jubbaland. Xildhibanadaan ayaa qaarkood waxa ay diyaarad qaasa ka soo qaadnayaan magalaada Nairobi oo ay isku aruursanayeen maalmihii la soo dhaafay.
Xildhibaanadan oo ka kooban labada aqal ayaa teegeero buuxda u haya hogaanka Axmad Madoobe iyaga oo u arka in doorashada Jubbaland ay noqon doonto mid wax ka badashada Xaalada Siyaasadeed ee ka sii daraysa maalinba maalinta ka danbeeysa ee soo wajahday dalka Soomaaliya.
Dhanka kale Xildhibanada Baarlamaanka Fedaraalka ayaa intooda badan u arka in baarlamaankii Soomaaliya burburay isla markaana ayan jirin hay’ad sharci dajin ee dalka ka saari karta xaalada uu ku jiro. Xildhibanada ayaa u arka guusha Axmad Madoobe iyo dadka reer Jubbland in ay soo afjarayso siyaasada qar iska tuurka ee Farmaajo iyo Kheyre.
Dowlada Jubbaland iyo hogaankeedaba waxa shaqo ah kuma laha imaatinka xildhibaanada ee Kismaanyo balse waa ay ku farxsan yihiin in taageerida shacabka Soomaaliyeed ee dimoqoraadiyada reer Jubbaland.
Previous articleMusharaxiintii hore ee doorashada J/land oo culays siyaasadeed dareemaya (Warbixin)
Next articleSawiradii ugu quraxda badnaa ee sanadkan laga qaaday Hajka (Daawo)